NANJAVONA TAMPOKA ILAY TARATASIN’NY FIARA VAO NOVIDIANA
FISOLOKIANA : MAJIKA SA FANOVA-MASO ?
Hatairana sy hagagana niampy fahadisoam-panantenana tanteraka, izany no nahazo ity renim-pianakaviana iray izay vao avy nividy fiara Polo. Naiditra hopitaly mihitsy moa ity ramatoa ity taorian’ny zava-nitranga taminy, izay tena nahavariana sy nahatalanjona tokoa.
Mitantara ny zava-nanjo ny reniny taminay ny zanak’ity renim-pianakaviana niharan’ny asa ratsin’ny mpisoloky ity, araka ny fanazavana nomen-dreniny azy.
Nikasa ny hividy fiara, araka izany, ity renim-pianakaviana ity. Nisy olona niteny taminy fa mahita fiara Polo, izay voalaza fa handeha ho any am-pitan-dranomasina ny tompony. Rehefa nojerena ilay fiara dia hita fa tena mbola tsara tokoa ka dia raikitra fa ho vidin’ity ramatoa ity. Natalotra ny vola rehetra vidin’ny fiara ary natao ny antotan-taratasy rehetra mahakasika ny famindrana ny fiara amin’ny tompony vaovao, toy ny “carte grise”….. Teny amin’ny Faritany Ambohidahy moa no nanaovana izany.
Niaraka nitaiingana ilay fiara ilay mpivarotra sy ilay ramatoa mpividy. Noho ny tsy fisian’ny toeram-piantsonana eo Ambohidahy anefa dia napetraka teny Antaninarenina ny fiara ary nidina an-tongotra nankeny Ambohidahy ny roa tonta.
Natao ny taratasy rehetra ary vita soa aman-tsara. Natolotra an-dramatoa ny “carte grise” sy ny lakilen’ny fiara. Niteny tamin’ilay ramatoa ilay lehilahy mpivarotra hoe “vita izay ny famindrana ny fiara ka efa anao tanteraka izy izao…”. Noho ny hafalian’ity ramatoa mpividy dia niangavy ilay lehilahy mpivarotra izy mba hiara-hisakafo aminy. Somary nandà ihany ilay lehilahy kanefa dia nanaiky ihany ary nilaza fa hiandry an-dramatoa ao ivelany. Ilay ramatoa moa mbola somary nijanona kely tao anatiny.
Noho ny hafaliany dia nisaotra an’Andriamanitra izy. Notazoniny teny an-tanany ilay “carte grise” ary nivavaka izy. Vita ny fivavahana ary niteny ny “amen”. Vita ny “amen” akory ny hatairany sy hagagany fa nanjavona tampoka teny an-tanany ilay “carte-grise”. Nojerena ny manodidina, tsy nisy. Marihina fa tsy izy ireny no teo amin’ilay toerana nivahany fa nisy vehvavy izay nifanatrika taminy ary nahita tsara ny fandehan-javatra rehetra. Gaga be ihany koa io ramatoa io. Ary samy nanotnany hoe “ fa nankaiza ilay taratasy teo, toa nanjavona fotsiny…?”
Niolomay nivoaka hijery ilay rangahy tao ivelany ilay ramatoa kanefa efa nadio ny rano nitana fa tsy tao intsony ilay lehilahy. Niezaka indray nananika an’Antaninarenina hijery ilay fiara, kanefa dia nanjavona ihany koa ilay fiara Polo.
Natao ny fikarohana ny mombamomba an’ilay rangahy,, niainga avy tamin’ilay anarana nomeny. Nojerena hatrany amin’ny “consulat” sy izay toerana rehetra mety ahafantarana ny mombamomban’ny olona iray kanefa dia tsy nisy. Tsy nisy ilay anarana nomeny mihitsy na taiza na taiza ny toerana naleha. Lany aiky hatramin’ny mpitandro filaminana.
Midika izany fa taratasy sandoka avokoa no nampiasain’ity lehilahy ity, torak’izany koa, nomerao fiara sandoka sy antotan-taratasy sandoka ihany koa ny an’ilay fiara namidiny. Ny hany sisa tavela tany an-tanan-dramatoa dia ilay lakile izay inoana fa tsy lakilen’ny fiara tena izy akory.
Fa ny tena nahavariana sy nahatalanjona dia ny nanjavonan’ilay “carte-grise” tampoka teny an-tanan’ilay ramatoa, tsy nisy tanana nandray anefa dia tsy hita tampka teo. Tsy hita popoka ihany koa ilay lehilahy mpivarotra .hatramin’izao, ny volabe lasany, ny fiara nanjavona.
Izany ve ny fisolokiana amin’ny endriny vaovao izay miainga amin’ny alalan’ny fanova-maso sa misy majika ambadika, sa inona ? Samy tsy nahitam-baliny izany hatramin’izao.
Maro ny endrika fisolokiana misy amin’izao fotoana, koa samia mailo raha manao na mividy zavatra fa tsy kely lalana ny mpanao ratsy.